तिथि मेरो पत्रु »5एक Wingwoman सम्झना गर्न लागि कुराहरू
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अप्रिल. 02 2020 |3मिनेट पढ्न
को wingwoman हुँदा एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो! के तपाईं विश्वस्त उत्थान र एक गोमा सबै माथि टुक्रा उठाएर छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न छ. तर एक मित्र को लागि छ के र आषा तिनीहरूले नै भने के हुनेछ र जुत्ता अन्य खुट्टा मा छ जब. म सँगै सुझाव राख्नुभएको तर म उनको नुन लायक कुनै पनि wingwoman त्यहाँ एक zillion थप छ थाह लाग्छ. एक तरिकामा म कुनै पनि wingwoman हामी सधैं काम मा सिकिरहेका छन् थाह लाग्छ – र पनि भुक्तानी गरिएको छैन!
आफ्नो मित्र बाटोमा केही भयानक मान्छे भेट्न जाँदै छ. दुर्भाग्यवश कि जीवनको. तर, जबकि तपाईं बारेमा केहि गर्न सक्दैन तपाईं बेन खुला दरार त्यहाँ हुन आवश्यक हुनेछ & जेरी गरेको पछि र बस तिनीहरूलाई लागि त्यहाँ. तिनीहरूले थाह तिनीहरूले खराबी गरे सुनिश्चित र तिनीहरूले कसैले भविष्यमा तिनीहरूलाई अझ उपयुक्त पूरा छौँ कि. स्पष्ट यदि तिनीहरूले ब्रेक-अप मा क्रूर कुराहरू धेरै भन्नुभयो तपाईँ शायद बस सुन्न विस्तार यी केही मार्फत जान हुनेछ वा. तिनीहरूले चोट गरिएको छ किनभने तिनीहरूले सिस्टम को त्यस प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ. ओह र निश्चित भएको पूर्व बारेमा नकारात्मक हुन!
सुनिश्चित तिनीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ
म एक पटक मित्र को एक समूह कुरा र केटा संग घर जाँदै कुरा एक केटी सुनेपछि सम्झन अघि रात एक बिट डरावना थियो. धन्न त्यो ठीक थियो तर त्यो अर्को दिन आफ्नो घर बाहिर प्राप्त गर्न एक बिट संघर्ष. किन उनि उनको मित्र मानिन्छ थिए भने तिनीहरू उहाँले एक बिट डरावना थियो भने उनको साथ गएनन् मेरो तत्काल प्रतिक्रिया थियो? म यो तपाईं निमन्त्रणा छैन भने गरिएको एक मान्छे घरमा मा आफैलाई गरौं गर्न कठिन छ तर म मेरो जीवनसाथी एक छिर्न घर जाँदै थियो म मेरो तिनीहरूले सोचे मुश्किल पनि प्रयास चाहन्छु लाग्यो भने म व्यक्तिगत विचार किनभने यो बिट गाह्रो हुन सक्छ ठान्नु म मा प्राप्त र सोफा मा सुत्न पागल थियो! तिनीहरूले ठीक थिए भने म हेर्न तिनीहरूलाई फोनमा हुन निश्चित चाहन्छु कि असफल मा. स्पष्ट भय तपाईं माथि-सुरक्षा पार छौँ लाग्छ सक्छ, तर म लामो लाग्छ मित्र तपाईं आफ्नो सुरक्षाको लागि यो गरिरहेका छन् थाहा हुनेछ. र यो आफ्नो मित्र हुन सक्छ के को वैकल्पिक र के दुःखको कुरा त अक्सर गर्छ भन्दा टाढा राम्रो छ.
मा ठेला-द्वारा अनिवार्य भएको
त्यो भारी बिट अघिल्लो भाग मा पूरा. अब रमाइलो सामान मा! कुनै पनि wingwoman तपाईंले-अप को आफ्नो आपूर्ति आवश्यक हुनेछ भनेर थाह, बाल ब्रश, combs, आदि … अडान-द्वारा मा. यदि तपाईं को या त कसैले देख्छन् त्यो बाटो तपाईंले गर्न सक्छन् प्रत्येक अन्य संग साझेदारी दुवै एक नकआउट हेर्न र विशेष कसैले प्रभावित गर्न अन्य भूल हुन सक्छ वस्तुहरू.
म तपाईंलाई ओस्कार-योग्य वा जस्तै को केहि हुन आवश्यक भन्दै छैन छु. म बटन लागि कार्य गर्न सक्दैन तर समय तपाईं विशेष हुनुहुन्न जब तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर बाहिर काम गर्न सिक्नेछौं. जब उनि कोही मन मान्छे बारेमा कुरा (हामी सबै त्यहाँ गरिएको छ किनभने र हामी कुनै पनि कसैले diss गर्न सक्नुहुन्छ!) उनि धेरै तिनीहरूलाई कुरा छ. र उनीहरूले सबै समय भन्न तर सबैभन्दा भाग लागि बस मुस्कान र जस्तै शब्दहरू interject गर्न आवश्यक सबै मा साह्रै रुचि हुन जाँदैछन् “साँच्चै?”, “ओह सुन्दर।”, “हाँ, त्यसैले रोमान्टिक” र तपाईं ठीक हुनु पर्छ. तिनीहरू पनि याद छैन व्यक्ति कुरा मा त रुचि हो.
कुरा गर्न उपलब्ध हुन
तपाईं समयमा जे काम गरिरहेका छौं भने वा त्यो फरक छ. तर यदि यो तपाईं सधैं प्रतीक्षा गर्न सक्छन् आफ्नो मित्र पहिलो स्थानमा राख्न तिनीहरूले एक प्रमुख मुद्दा भएको भने तिनीहरूले बारेमा कुरा गर्न आवश्यकता छ भनेर गरिरहनुभएको कुरा हो. तिनीहरूले निरन्तर गरिरहेका छन् र तपाईं प्राप्त केहि गरेको छैन वा तिनीहरूले तपाईं को लागि नै गर्दैन थियो बदलामा भने तपाईं पुनर्विचार गर्न आवश्यक पर्दछ तर यदि राम्रो मित्रता तिनीहरूलाई लागि त्यहाँ, तिनीहरूलाई लागि बाहिर हेर्न र तपाईं साँच्चै राम्रो wingwoman वा मित्र रूपमा भन्दा कुनै पनि थप गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं Dateable हुनुहुन्छ?